महामन्दी वा भीषण मन्दी ((अङ्ग्रेजी: The Great Depression) द ग्रेट डिप्रेशन) (१९२९-१९३९) को नामले चिनिने यो घटना विश्व व्यापी आर्थिक मन्दी थियो । यो सन् १९२९ मा सुरु भयो र १९३९-४० सम्म जारी रह्यो। यो बिसौ शताब्दिको सबैभन्दा लामो, गहिरो र विस्तारित मन्दी थियो। यो विश्वको आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा ठूलो र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मन्दी थियो। यस घटनाले सारा विश्वमा यस्तो विनाश ल्यायो कि यसको पुन: प्राप्त गर्न धेरै वर्ष लाग्यो।[स्रोत नखुलेको] यसले ठूलो समष्टिगत व्यापक आर्थिक र राजनीतिक प्रभावहरू पार्‍यो। यसले फासीवादलाई बढायो र अन्ततः दोस्रो विश्वयुद्धमा पुर्‍यायो। यद्यपि यो युद्ध विश्वलाई महामन्दीबाट निकाल्ने साधन पनि भयो। यही अवधिले साहित्यकारहरू र फिल्म निर्माताहरूलाई पनि आकर्षित गर्यो र यस विषयमा धेरै पुस्तकहरू लेखिएका थिए। धेरै चलचित्रहरू पनि बने र धेरै लोकप्रिय भए।
अमेरिकाको १९१० देखि १९६० सम्मको वार्षिक रियल कुल गृहस्थ उत्पादन, महामन्दीको वर्ष (१९२९-१९३९)को प्रकाशमा
अमेरिकाको १९१० देखि १९६० सम्मको बेरोजगारी दर, महामन्दीको वर्ष (१९२९-१९३९)को प्रकाशामा
४.१ साम्यवादतर्फ रुझान वृद्धि
४.३ हतियार अर्थव्यवस्था को उदय
४.४ पुँजीवाद बलियो भयो
५ विश्वमा आर्थिक संकटको प्रभाव
२ अक्टोबर १९२९ मा अमेरिकी शेयर बजारमा गिरावटबाट यसको प्रारम्भ भयो ।
१९३० देखि १९३३ को बीच यो विश्वको सबै प्रमुख देशहरूमा फैलियो।
१९३९ मा द्वितीय विश्वयुद्ध सुरु भएपछी यो मन्दी नियन्त्रणमा आउन थाल्यो १९३९ मा दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएपछि यो नियन्त्रणमा लिन थाल्यो।
सन् १९३० को दसकको महामन्दी विश्वको अहिलेसम्मको सर्वाधिक विध्वंसक आर्थिक त्रासदी मानिन्छ जसको कारणले लाखौँ मानिसको जीवन नरकमा परिणत गरेको थियो। यसको सुरुवात २९ अक्टोबर १९२९ मंगलबार को दिन अमेरिकामा शेयर मार्केट को पतनको साथ भयो। यस दिनलाई कालो मंगलबार (Black Tuesday) पनि भनिन्छ। यसपछि, अर्को दशकसम्म विश्वको धेरै देशहरूमा आर्थिक गतिविधि रोकियो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अन्त्य भयो।
मागमा भारी कमी गिरावट भयो र औद्योगिक विकास को चक्का अवरुद्ध भयो । लाखौं मानिसहरूले आफ्नो जागिर/ नोकरी गुमाए। कृषि उत्पादनमा पनि ६०% सम्म कमी आयो । एक दशकसम्म हाहाकार मच्चाएपछी दोश्रो विश्वयुद्ध को सुरुवातको साथ यसको प्रभाव कम हुन थाल्यो
अमेरिकी शेयर बजारमा गिरावटको यति मनोवैज्ञानिक असर पर्यो को त्यहाँका मानिसहरूले आफ्नो खर्चमा १० प्रतिशतसम्म कम गरे जसबाट माग प्रभावित भयो ।
मानिसहरूले बैङ्कको कर्जा तिर्न बन्द गरे जसकारण बैङ्किङ व्यवस्था हल्लियो । कर्जा पाउन बन्द भयो, मानिसहरूले बैङ्कबाट पैसा निकाल्न सुरु गरे। यसबाट कयौं बैङ्कहरू टाट पल्टिएर बन्द भए ।
१९३० को सुरुवातमा अमेरिकामा भएको खडेरीको कारणले कृषि बार्बाद भयो जसको कारण कृषि अर्थव्यवस्था कमजोर भयो। यसले घाउमा नुनचुक गर्ने काम गर्यो ।
अमेरिकाको यस मन्दीले पछि अन्य देशलाई पनि आफ्नो चपेटमा लियो। र देख्दादेख्दै यो मन्दी; महामन्दीमा परिणत भयो ।
साम्यवादतर्फ रुझान वृद्धिसम्पादन
कम्युनिष्ट राष्ट्र भएकोले सोभियत सङ्घले आफूलाई पूँजीवादी प्रणालीबाट अलग गरेर राखेको थियो । पूँजीवादी देशहरू सोभियत संघसंग सम्बन्ध राख्न चाहदैन्थे । तर यसमा सोभियत संघलाई फाइदा भयो र महामन्दीबाट उम्क्यो जसले पूँजीवादी देशहरूको कमर भाच्यो । यस अवधिमा सोभियत संघमा औद्योगिक विस्तार भयो।
यसले मार्क्सवादमा प्रतिष्ठा मिल्यो र पूँजीवादको विकल्पको रूपमा देखा पर्यो । यही कारण नै थियो कि धेरै प्रभावित देशहरूमा यसबाट प्रेरित भएर सामाजिक र साम्यवादी प्रदर्शन र आन्दोलनहरू भए।
धेरै विशेषज्ञहरू यो विश्वास गर्छन कि फासीवादको उदयमा यो ठूलो महामन्दी को नै भूमिका थियो। फासीवादी नेताहरूले सम्बन्धित आफ्नो देशहरूमा प्रचार गर्न थाले कि ती देशहरूमा जनताको खराब नराम्रो अवस्थाको लागि त्यहाँका पुँजीवादी नेताहरू जिम्मेवार छन्, यस्तो अवस्थाबाट फासीवादले नै बचाउन सक्छ। जर्मनीमा हिटलरले यस महामन्दीको बाहानामा आफ्नो पकड बलियो बनाए। जापानका हिरोहितो ले चीनमा घुसपैठ गरेर मन्चुरियामा यस आधारमा खानीहरू विकास गर्‍यो कि यसद्वारा महामन्दीबाट राहत पाउन सकिन्छ। तर यसले एक मात्र परिणाम ल्यायो - दोस्रो विश्व युद्ध।
हतियार अर्थव्यवस्था को उदयसम्पादन
यस महामन्दीको सबैभन्दा ठूलो नतिजा यो भयो कि अमेरिका जस्ता देशको अर्थ व्यवस्था सुदृढ पार्न एक ठूलो कोष हात पारे । अमेरिकालगायत विभिन्न देशहरूमा सैनिक प्रचार-प्रसारले रोजगारीको ढोका मात्र खोलेन, हतियार उत्पादनद्वारा अर्थतन्त्रमा फेरी सास आयो। यसले १९३०को दशकको उत्तरार्धमा महामन्दीबाट निस्कन मद्दत पुर्‍यायो। पछि अमेरिका सहित पश्चिमी देशहरूले यसलाई आफ्नै खेल बनाए। आज यी देशहरूले हतियारको बिक्रीबाट ठूलो नाफा कमाउँछन्।
पुँजीवाद बलियो भयोसम्पादन
महामन्दीको बेलामा पूँजीवादसँगको मोहको अवस्थालाई बुझेर संयुक्त राज्य अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्ध पछि पश्चिमी देशहरूलाई सुदृढ पार्ने योजना लागू गर्‍यो। 'मार्शल प्लान' भनेर चिनिने कागजमा यो योजना दोश्रो विश्वयुद्धबाट पीडित देशहरूलाई पुनर्निर्माण गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्य थियो, तर वास्तविक उद्देश्य भनेको साम्यवादको सम्भावित विस्तार रोक्न थियो। यस अन्तर्गत, युरोपेली देशहरूलाई १७ अरब डलरको वित्तीय र प्राविधिक सहायता प्रदान गरियो। यसको बाबजुद पनि, सोभियत संघको बढ्दो शक्तिलाई रोक्न सकिएन।
विश्वमा आर्थिक संकटको प्रभावसम्पादन
आर्थिक संकटको परिणामस्वरूप जर्मनीमा बेरोजगारी अत्यधिक बढ्यो। सन् १९३२ सम्म ६० लाख मानिस बेरोजगार भए, बेरोजगारी डर २५% पुग्यो।. यसबाट जर्मनीमा बाह्य गणतन्न्रको स्थिति भयो। हिटलरले यसको फाइदा उठाएर सत्तामा आए । यस प्रकार आर्थिक मंदीमा जर्मनीमा नाजीवादको शासन स्थापित भयो।
सन् १९३१ मा आर्थिक मन्दीको कारणले बेलायतले स्वर्णमानको परित्याग गर्नु पर्यो। सरकारले सुनको निर्यात बन्द गर्यो। सरकारले आर्थिक स्थिरीकरणको नीति अपनायो। यसले बेलायतलाई आर्थिक मन्दीबाट मुक्त हुन मद्दत पुर्‍यायो। व्यापारमा संरक्षणको नीति अपनाएर व्यापारको सन्तुलन बेलायतको पक्षमा भयो। बेलायती सरकारले सस्तो मुद्रा दर अपनायो जस गर्दाले बैङ्क दरमा कमी आयो। यसले विभिन्न उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्यो।
अन्य देशको तुलनामा फ्रान्समा महामन्दीको प्राभाव कम पर्यो, सबैभन्दा ठूलो प्रभाव १९३१ मा देखिएको थियो । फ्रान्सको आर्थिक स्थिति जर्मनीबाट प्रथम विश्व युद्धको अत्यधिक क्षतिपूर्तिको कारण बलियो थियो, त्यसैले आर्थिक मन्दीले फ्रान्समा अधिक प्रभाव पारेन। फ्रान्सेली मुद्रा फ्रेन्क आफ्नो विश्वसनीयता जोगाउन सफल भयो।
स्टालिनको आर्थिक नीति एवं पंचवर्षीय योजनाहरू को कारणले सोभियत सङ्घ रसियाको आर्थिक स्थिति सुदृढ थियो। तसर्थ, त्यो आर्थिक मन्दीले खासै प्रभावित भएन। यसले संसारमा कम्युनिष्ट प्रणालीको शक्ति,मजबूती र पूँजीवादी प्रणालीको खोक्रोपनलाई अगाडि पर्दाफास गर्‍यो।
बेरोजगार मानिसहरूको र्याली, टोरोन्टो , , क्यानाडा
अमेरिकामा बेरोजगारी १५ लाखबाट बढेर १ करोड ३० लाख पुग्यो । युरोपमा आर्थिक मन्दी को कारणले अमेरिकाको युरोपेली ऋण डुब्ने स्थितिमा आयो । १९३२ ई. को चुनावमा आर्थिक सङ्कट को कारणले रिपब्लिक पार्टीका हर्बर्ट हुबर पराजित भए। डेमोक्र्याटिक पार्टीका उम्मेदवार फ्र्यांकलिन डी. रुजवेल्टले आर्थिक सुधार कार्यक्रमको घोषणाको आधारमा नै चुनाव जितेका थिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्टको नयाँ सम्झौतासम्पादन
आर्थिक मन्दीबाट माथि आउनका लागि अमेरिकी राष्ट्रपतिले नयाँ डिलको घोषणा गरे। उनले नयाँ डिलका उद्देश्यहरूलाई यी शब्दहरूमा संक्षेपमा प्रस्तुत गरे,
हामी हाम्रो अर्थव्यवस्था मार्फत कृषि र उद्योग बीच सन्तुलन ल्याउन चाहन्छौं। हामी मजदुर-कामदार, रोजगारदाता र उपभोक्ताहरू बीच सन्तुलन कायम गर्न चाहन्छौं। हाम्रो उद्देश्य यो पनि हो कि हाम्रो आन्तरिक बजारहरू समृद्ध र ठूलो रहुन् र अन्य देशहरूसँगको हाम्रो व्यापार बढोस् ।
रुजवेल्टको नयाँ डिलले अमेरिकी अर्थव्यवस्थामा क्रान्तिकारी सुधारको सङ्केत देखिन थाल्यो। औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा वृद्धि भयो , निश्चित न्यूनतम ज्याला दर र अधिकतम काम घण्टा। यस प्रकार अमेरिका बिस्तारै आर्थिक मन्दीबाट मुक्त हुनतर्फ गयो। यसैले फ्र्याङ्क्लिन डी. रुजबेल्टको नयाँ डिल सफल सावित भयो।
टीजे केहो र ईसी प्रेसकोट द्वारा सम्पादन गरिएको बीसौं शताब्दीका महान् डिप्रेशनहरू
थोरै अफ द ग्रेट डिप्रेशन, आरएल नर्मन, जूनियर
सन् १ 30 .० को दशकमा अमेरिका। धेरै ठूलो मल्टि मध्यस्थता परियोजना अमेरिका मा महान डिप्रेशन मा
मन्दी? डिप्रेसन? के फरक छ? (About.com)
रान्डल पार्कर द्वारा EH.NETबाट महान उदासीनताको एक सिंहावलोकन ।
लरेन्स रीड द्वारा महान डिप्रेशन को महान मिथ्या
फ्रैंकलिन डी। रूजवेल्ट लाइब्रेरी र सङ्ग्रहालय अवधि का प्रतिलिपि मुक्त रहन को लागि
आर्थिक तनाव: मरे रोथबार्ड (१ oth 69 ))बाट तिनीहरूको कारण र ईलाज
एनआई मा ठूलो डिप्रेशन को प्रभाव, NI को लागि दोस्रो विश्व युद्ध अनलाइन स्रोत मा
गहिरो दक्षिणमा ठूलो उदासीनता
१ 29 २ Cra क्र्यास र महान डिप्रेशनबाट पाठहरू कसरी २०० 2008 को किनेसियन डेबकलको रीमेकबाट बच्न
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=महामन्दी&oldid=907690" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन ३ सेप्टेम्बर २०२०, १७:५५
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १७:५५, ३ सेप्टेम्बर २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।